कहाँ गयो त अमेरिकी सेनाको वेपत्ता हेलिकोप्टर ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १ जेष्ठ २०७२, शुक्रबार ०४:२५ |
भूकम्प पीडितहरुको लागि राहत वितरण र उद्दार गर्न आएको अमेरिकी सेनाको हेलिकोप्टर बेपत्ता भएको चार दिन पूरा भएको छ । तर हेलिकोप्टरबारे अझै केही सूचनासम्म पाएको छैन । विहीवार दिनभर हवाइमार्ग र स्थलमार्ग मार्फत सम्भावित क्षेत्रहरुमा हेलिकोप्टरको खोजी गरिएको थियो । दोलखालाई केन्द्रविन्दु बनाएर हेलिकोप्टरको खोजी कार्य शुक्रवार पनि विहानैदेखि शुरु भएको छ । हेलिकोप्टरको खोजीका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । चारदिनको अथक प्रयासपछि पनि हराइरहेको हेलिकोप्टरबारे केही सूचना प्राप्त नभएपछि अहिले विभिन्न किसिमका शंका र अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ ।
आखिर हराइरहेको हेलिकोप्टर कहाँ गयो त ?
भूकम्पले दोलखा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र निकै नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । त्यसैले अमेरिकी सेनाको उक्त हेलिकोप्टर जिल्लाको कुनै विगट भूकम्पीय क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । ८ जना सवार उक्त हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान पनि छ ।
यस्तै हेलिकोप्टर उडानका क्रममा नेपालको हवाइ सीमा नाघेर चीनको हवाइ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आशंका समेत गर्न थालिएको छ । विना जानकारी र अनुमति कुनै मुलुकको सेनाको हेलिकोप्टर आफ्नो सीमानामा प्रवेश गर्दा सतर्क र आतंकित बन्नु नौलो होइन । त्यसैले चीनीयाँ सेनाले उक्त हेलिकोप्टर खसाएको हुनसक्ने एकथरिको अनुमान पनि छ । चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो कटुताले यो सम्भावनालाई पनि मिथ्या भनिहाल्नसक्ने ठाउँ नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यद्यपि यसबारेमा अमेरिकी सेना,नेपाली पक्ष र चीनियाँ पक्ष कसैले पनि केही भनिसकेको अवस्था भने छैन ।
Previousशुक्रबारका लागि तय संविधानसभाको बैठक स्थगित
Nextशनिवार विहानै ६ पराकम्पन,४८ घण्टा खतरामा
अमेरिकामा ट्रम्प विरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै
१९ माघ २०७३, बुधबार ०१:३३
स्थानीय तहमा अझै तीन निर्वाचन बाँकी
७ जेष्ठ २०७४, आईतवार ०२:०९
डाक्टरले लाए आफ्नै शरीरमा आगो
२ भाद्र २०७१, सोमबार १८:१३
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मुख खोले–पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबाट खुशी छैनँ
६ फाल्गुन २०७२, बिहीबार १७:५३